I-Android Oreo: igama layo liqinisekisiwe futhi lezi yizindaba zalo eziphambili | Izindaba zamagajethi
I-Android Oreo: igama layo liqinisekisiwe futhi lezi yizindaba zalo eziphambili
URuben gallardo | | Android, Software
Sivele sikutshele ezinsukwini ezimbalwa ezedlule: kanye nokusitheka kwelanga izolo, I-Google inqume ukwethula inguqulo yayo yakamuva ye-Android. Kwahlala kwaqinisekiswa ukuthi kungaba yini igama elikhethwe i-Android 8.0. Futhi yize bekuyimfihlo inamaphimbo, sesingavele siqinisekise ukuthi igama elitholwa yinguqulo yamanje ngu I-Android Oreo.
Manje, kwakungekhona nje ukuthi igama lesibizo lesi nguqulo laliwumbango, kepha lokho ipulatifomu le-Android elizosinika kona futhi nokuthi yiziphi izindaba ezingatholwa ngamatheminali amanje wesistimu yokusebenza yakwaGoogle. Ngaphezu kwalokho, lokhu kuzosinika nomqondo wokuthi amaqembu alandelayo azosinikeza ini -kakhulu Smartphones njengoba amaphilisi- ezokwethulwa emakethe. Ngakho-ke, ake sibukeze izindaba eziyinhloko ongazithola ku-Android Oreo.
1 I-Android Oreo izoshesha ngokuphindwe kabili kune-Android Nougat
2 Isithombe-esithombeni, 'izinhlelo zokusebenza' ezimbili esibukweni ngasikhathi sinye
3 Ukuqedela okuzenzakalelayo kuza ku-Android Oreo
4 Amaphuzu esaziso kuzinhlelo zokusebenza
5 Izinhlelo zokusebenza ezisheshayo ze-Android - Yeqa ukufaka
6 Ama-emoji amasha (ukuba yi-60 ngqo)
7 Amabhethri amaningi nokuphepha okwengeziwe ku-Android Oreo
8 Izibuyekezo ezisheshayo ezivela kule nguqulo
I-Android Oreo izoshesha ngokuphindwe kabili kune-Android Nougat
Okuhlangenwe nakho komsebenzisi kubaluleke kakhulu kumsebenzisi: uma kungenjalo, ngokuqinisekile ngokuzayo ngeke kuphindwe ipulatifomu. Ngokusho kwekhasi lesethulo senguqulo elandelayo, i-Android 8.0 -aka I-Android Oreo— izoshesha ngokuphindwe kabili kune-Android Nougat yamanje.
Ngokusho kwenkampani, wonke umuntu uzoba uketshezi kakhulu futhi izobulala izinqubo zangemuva. Ngale ndlela bazokhulula iprosesa bese begxila emsebenzini ongaphambili. Sizobona ukuthi iziphatha kanjani kuma-mobiles amanje.
Isithombe-esithombeni, 'izinhlelo zokusebenza' ezimbili esibukweni ngasikhathi sinye
Es omunye wemisebenzi eceliwe kakhulu emphakathini. Ngaphezu kwalokho, le nto entsha enikezwa ku-Android Oreo yinto ebingivele ingenziwa kwezinye izinhlelo zokusebenza isikhathi esithile. Ngaphezu kwalokho, singakutshela ukuthi i-Samsung isivele ikwenzile lokhu kumamodeli ayo isikhathi esithile, ikakhulukazi ebangeni layo leNothi.
Manje uzoba nethuba lokukwenza sebenza ngezicelo ezimbili esikrinini ngasikhathi sinye. Lokhu kuzoba wusizo olukhulu uma idluliswa kufomethi yethebhulethi, lapho umsebenzisi angabuka ividiyo ye-YouTube ngenkathi enza i-aphoyintimenti ekhalendeni. Futhi, kusazobonakala ukuthi ngabe zonke izinhlelo zokusebenza zizohambisana nalesi sici.
Ukuqedela okuzenzakalelayo kuza ku-Android Oreo
Iqiniso ukuthi ngenani lezicelo esizisebenzisayo kanye nenombolo yamagama abasebenzisi namaphasiwedi adingekayo ukuwasebenzisa, isikhathi esisithathayo ukugcwalisa wonke amabhokisi ebhokisi siphezulu impela. Manje uma lesi sinyathelo sisuswa, sikwazile ukushesha emizameni yethu.
Ngakho-ke, iGoogle icabange ngalesi sici futhi yethula ukuqedela okuzenzakalelayo okudumile nokuhlonishwayo kusistimu yayo yokusebenza ephathekayo ukuze ikhumbule 'ukungena kwethu' khona manjalo futhi isivumele ukuthi sihambe ngokushesha okukhulu emisebenzini yethu yansuku zonke.
Amaphuzu esaziso kuzinhlelo zokusebenza
Njengakwizicelo zemiyalezo esheshayo ezisikhombisa ukuthi zingaki izaziso ezisilindeleyo uma sesivule uhlelo lokusebenza, yilokhu okusilindeleyo kusukela manje ku-Android Oreo kuningi lwezinhlelo esizifakile kumatheminali ethu.
Ngale ndlela, ukuphathwa kwezaziso ezisifinyelela kuhlehliswa futhi sizokwazi ngaso sonke isikhathi ukuthi yini esilindele kulokhu. Kungaphezulu, uma senza ukucindezela okude kusithonjana sohlelo lokusebenza, ibhokisi lengxoxo lizovela futhi singaxhumana ngqo nezaziso ezingenayo. Ngamafuphi: futhi futhi sibhekisa ekuphathweni kwesikhathi sethu.
Izinhlelo zokusebenza ezisheshayo ze-Android - Yeqa ukufaka
Ukusetshenziswa kwezinhlelo zokusebenza - futhi ngaphezu kwazo zonke izakhiwo - kuhlehliswa kakhulu ngomsebenzi omusha 'Wezinhlelo Zokusebenza Ezisheshayo'. Futhi ngale ndlela, thola izinhlelo ezintsha ngesiphequluli, amanethiwekhi omphakathi noma izinhlelo zokusebenza zemiyalezo esheshayo kuzoba lula kakhulu.
Lokho lo msebenzi osivumela khona yeqa ukufakwa okuyisidina futhi uhlole ngqo izinhlelo ngokushelelayo. Lokho wukuthi, uzothola — noma uthole — izixhumanisi eziya kuzinhlelo zokusebenza, futhi uma nje uzicindezele, uzokwazi ukuzisebenzisa.
Ama-emoji amasha (ukuba yi-60 ngqo)
Sisebenzisa ama-emoji amaningi ezingxoxweni zethu ezibonakalayo. Kungakho-ke lapho sinakho okuningi ku-repertoire yethu, kungcono. Ngakho-ke, iGoogle kufanele isebenze futhi iphinde yakha kabusha uhla lwayo lwama-emoji akhona. Ngaphezu kwalokho, ifake abasha abangafika kwabangu-60 owawungayiboni kuze kube manje. Awufisi ukwazi ukuthi ziyini? Sesivele siphuthelwa yizipikili.
Amabhethri amaningi nokuphepha okwengeziwe ku-Android Oreo
Ekugcineni, iGoogle ayikhohlwa ukuvikelwa nokuzimela kwamatheminali. Ngakho-ke ubeke uhlelo olusha lokuvikela idatha lomsebenzisi ngeGoogle Protect. Lokhu Ngeke nje inakekele ukugcina imininingwane yomsebenzisi iphephile. Kuzobuye kube nomsebenzi wokubhekela uhlelo ngalunye esilufakayo ezikhumulweni zethu.
Okwamanje, ngenguqulo entsha ngayinye yohlelo lokusebenza, I-Google izamile ukunciphisa ukusetshenziswa kwamandla. Futhi i-Android 8.0 yayingeke ibe ncane. Ngakho-ke, kuphela 'ngokubulala' izicelo ezingemuva ezizothola ukuzimela.
Izibuyekezo ezisheshayo ezivela kule nguqulo
Njengoba kwenzeka njalo, amakhompiyutha okuqala okulindeleke ukuthi athole le nguqulo entsha yiwo amaselula athengiswe yiGoogle ngesitolo sawo. Kodwa-ke, ngokuphela konyaka ezinye izinkampani kulindeleke ukuthi zijoyine. Sikhuluma ngakho I-Samsung, i-Huawei, i-LG noma i-Nokia entsha. Futhi ukuthi inkampani isivele ikhiphe ikhodi yomthombo ukusheshisa izibuyekezo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Software » I-Android Oreo: igama layo liqinisekisiwe futhi lezi yizindaba zalo eziphambili
Le yi-trailer ye-4K ememezela i-Final Fantasy XV ye-PC
I-HTC yehlisa intengo yezibuko zayo ezingokoqobo i-HTC Vive